မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဓမ္မတာလာနေစဉ် ချစ်တင်းနှောရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
ဓမ္မတာလာနေစဉ် ချစ်တင်းနှောရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
အမျိုးသမီးငယ် အများစုဟာ ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ဗဟုသုတ မရှိကြပါဘူး။ အချို့က ကိုယ်ဝန်မဆောင်ချင်သေးရင် ရာသီမလာတဲ့အချိန်မှာသာ လိင်ဆက်ဆံသင့်တယ်လို့ အကြံပေးကြပြီး၊ အချို့က ရာသီလာချိန်(သားဥမဆင်းခင်အချိန်ထိ) လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ အနည်းစုသော အမျိုးသမီးအချို့က လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုအဖြစ် ရာသီလာစမှာ လိင်ဆက်ဆံပြီး ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာ ငြင်းနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေ မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ရာသီလာချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ နည်းသလား/များသလား … ?
Menstrual Cycle အရဆိုရင်တော့ ရာသီလာချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ အလွန်နည်းပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမျိုးသမီးအများစုဟာ ရာသီလာပြီး 11 ရက်ကနေ 15 ရက်အတွင်းမှာသာ မျိုးအောင်တဲ့ သားဥတွေ ဆင်းလေ့ရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လစဉ်တစ်ရက်နေ့ ရာသီလာတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လစဉ် 11 ရက်မှ 15
ရက်အထိဟာ Fertile Time ဖြစ်ပါတယ်။ ချွင်းချက်ရှိသော အမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိနိုင်ကောင်းပါတယ်။
(၂) ရာသီလာချိန် အကာအကွယ်အသုံးမပြုရင်ကော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား … ?
ရာသီလာချိန် လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ အလွန်နည်း-တယ်လို့သာ ဖြေထားခြင်းကို သိရှိစေချင်ပါတယ်။ မရ
နိုင်ဘူးလို့ ဖြေထားခြင်း မရှိပါ။ ဒါကြောင့် အကာအကွယ်မပါဘဲ (မည့်သည်အချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေ) အမျိုးသားရဲ့ သုတ်ပိုးနဲ့ မမျိုးဥတို့ တစ်နည်းနည်းနဲ့ တွေ့ဆုံတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။ အကာအကွယ်မပါဘဲ
လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် ကိုယ်ဝန်မရဖို့ အာမခံတဲ့ရက်ရယ်လို့ လုံးဝ မရှိပါဘူး။
(၃) သားဥမကျွေတဲ့ရက်တွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိသလား …?
အမျိုးသားတွေရဲ့ သုတ်ပိုးဟာ အမျိုးသမီးရဲ့သားအိမ်ခေါင်းထဲမှာ7ရက်လောက်အထိ တစ်ခါတလေ အသက်ရှင်နိုင်ပါ
တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီနေ့ သားဥမကြွေလို့ လိင်ဆက်ဆံလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာ သားဥက
ကြွေတယ်ဆိုရင်လည်း အမျိုးသားရဲ့ ရှင်ကျန်နေဆဲသုတ်ပိုးနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ မမျိုးဥ တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသေး
တယ်။ ဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုးဟာ အလွန်တိုတောင်းတဲ့ ရာသီလာချိန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
(၄) တားမြစ်ဆေးတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိသလား …? ကိုယ်ဝန်လိုချင်တဲ့အခါ တားမြစ်ဆေးကို ဘယ်လို ရပ်ထားသင့်သလဲ … ?
တားမြစ်ဆေးတွေမှာ အန္တရာယ်ဆိုတာထက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိပါတယ်။ လုံးဝ ဥပါဒ်ကင်းစင်တဲ့ ဆေးရယ်လို့ မပေါ်သေးပါဘူး။ ပေါ်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝအရ တားမြစ်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက် မျှော်မှန်းမထားတဲ့ အန္တရာယ်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကလေး ပေါင်မပြည့်ဘဲ မွေးဖွားတာ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံတာတွေဟာ တားမြစ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဝန်လိုချင်တဲ့အခါ တားမြစ်ဆေးကို ဘယ်လို ဖြတ်ရမလဲဆိုရင် အနည်းဆုံး သုံးလလောက် ဆေးကြိုဖြတ်ထားရပါတယ်။ ပိုကောင်းတာကတော့ ငါးလမ ခြောက်
လအထိ ဆေးလုံးဝမသုံးဘဲ အကာအကွယ်ဖြင့်သာ လိင်ဆက်ဆံပါ။ အဲဒီနောက်မှသာ မိမိသဘောကျ လိင်ဆက်ဆံပါ။
Credit: myo min htet[လှတောသား]
Author MSSK at 4:22:00 PM